Akụkọ - Kedu ihe dị iche n'etiti valvụ ụwa na valvụ ọnụ ụzọ ámá?
Globe valves, valvụ ọnụ ụzọ ámá, valvụ urukurubụba, valvụ nlele na valvụ bọọlụ, wdg. Valvụ ndị a bụzi ihe njikwa dị mkpa na sistemụ ọkpọkọ dị iche iche. Ụdị valvụ ọ bụla dị iche n'ọdịdị, nhazi yana ebumnuche arụ ọrụ. Agbanyeghị, valvụ nkwụsị na valvụ ọnụ ụzọ ámá nwere myirịta dị n'ọdịdị, ha abụọ nwere ọrụ nke ibipụ na pipeline. Ya mere, ọtụtụ ndị enyi amaghị valvụ ahụ ga -enwe mgbagwoju anya gbasara ha. N'ezie, ọ bụrụ na i jiri nlezianya leba anya, ọdịiche dị n'etiti valvụ ụwa na valvụ ọnụ ụzọ ámá buru oke ibu. Nke a bụ ọdịiche dị n'etiti valvụ ụwa na valvụ ọnụ ụzọ ámá:
1. Ụkpụrụ ọrụ nke valvụ ụwa na valvụ ọnụ ụzọ ámá dị iche
Mgbe emepere valvụ mechiri emechi ma mechie, valvụ valvụ na-ebili. Tụgharịa wiilị aka ahụ, wiilị aka ahụ ga -atụgharị wee bulie ya na ogwe valvụ; mgbe valvụ ọnụ ụzọ ámá, mgbe ọ na -agbagharị wiilị aka iji mee ka valvụ valvụ na -agbago na ala, wiil aka ahụ agaghị agagharị.
Valvụ ọnụ ụzọ ámá nwere naanị steeti abụọ: mepere emepe kpamkpam ma ọ bụ mechiri emechi. Ọnwụ na mmechi ọnụ ụzọ ahụ buru ibu, oge mmeghe na mmechi dị ogologo; Mwakpo ngagharị nke wedge nke valvụ nkwụsị pere mpe, na wedge nke valvụ nkwụsị nwere ike kwụsị n'otu ọnọdụ n'oge ngagharị, maka nke a ga -eji ya maka mmegharị mmegharị, ebe enwere ike iji valvụ ọnụ ụzọ maka ịkpụ. -ọpụ ma enweghị ọrụ ndị ọzọ.
2. Ọdịiche arụmọrụ dị n'etiti valvụ ụwa na valvụ ọnụ ụzọ ámá
Enwere ike iji valvụ mechiri emechi maka mgbapụ na mmegharị. Nguzogide mmiri nke valvụ ụwa pere mpe, ọ na -arụkwa ọrụ karịa imepe na imechi ya, mana n'ihi na anya dị n'agbata osisi ntụpọ na elu akara ahụ dị mkpụmkpụ, yabụ ọrịa mmeghe na mmechi dị mkpụmkpụ.
Enwere ike imeghe valvụ ọnụ ụzọ mechie ma mechie ya. Mgbe emepere ya nke ọma, nkwụsi ike na-agafe agafe na ọwa valvụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efu, yabụ mmeghe na mmechi nke valvụ ọnụ ụzọ ámá ga-azọpụta ndị ọrụ, mana wedge dị anya site na akara akara ya mere oghere na mmechi oge dị ogologo.
3. Ntughari ntụzịaka nrụnye dị n'etiti valvụ ụwa na valvụ ọnụ ụzọ ámá
Mmetụta nke valvụ ọnụ ụzọ ámá n'akụkụ abụọ ahụ bụ otu. Enweghị ihe achọrọ maka ụzọ mbata na ụzọ mbata maka nrụnye, na onye na -ajụ ase nwere ike na -asọba n'akụkụ abụọ ahụ.
Mana ekwesịrị ịwụnye valvụ ụwa n'ụzọ kwekọrọ na ntuziaka nke akara akụ na ahụ valvụ.
4. Ọdịdị nhazi dị n'etiti valvụ ụwa na valvụ ọnụ ụzọ ámá
Nhazi nke valvụ ọnụ ụzọ ámá ga -adị mgbagwoju anya karịa valvụ ụwa. Site n'ọdịdị, valvụ ọnụ ụzọ ámá dị ogologo karịa valvụ ụwa na valvụ ụwa dị ogologo karịa valvụ ọnụ ụzọ maka otu nha. Tụkwasị na nke ahụ, valvụ ọnụ ụzọ ámá nwere nhazi nke azuokokoosisi na ebili na-adịghị elu, mana valvụ ụwa enweghị ụdị ọdịiche ahụ.
Akuku Globe Valve, Ogwe bọọlụ Trunnion, Valve Gate Valve, Igwe anaghị agba nchara Gate Gate valvụ, Valve Gate Gate, Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ,